Time Core All Messages Grade 1 X | Wordworks
Iwotshi iyancinciza ngoku kwaye sele lifikile ixesha lokuba wena nomntwana wakho nonwabe futhi nifunde kunye kule nkqubo iTIME. Nikunye nomntwana wakho, khangelani indawo ethe cwaka, neniza kukhululeka xa nihleli kuyo nize nibeke bucala imizuzu engama-30 eniza kusebenza ngayo kunye ngaphandle kweziphazamiso.Read More
Amabali akwiiNcwadi eziNcinci anezivakalisi ezilula ezihambelana nemifanekiso kwiphepha ngalinye. Ungaziqokelela uze uzigcine kwinto onokuzifaka kuyo ukuze umntwana wakho abe nethala lakhe elincinci leencwadi aza kulonwabela nanini na xa efuna. Iincwadi ezincinci zenza ukuba ixesha lamabali libe mnandi!
Wakuba ugqibile ukuyisonga incwadi encinci, yityhile uze uncokole kunye nomntwana wakho ngomfanekiso ngamnye. Emva koko, funda isihloko sencwadi kunye nezivakalisi kwiphepha ngalinye. Wakhombe amagama njengokuba uwafunda.
Mkhuthaze umntwana wakho ukuba afunde kunye nawe, ukuba umntwana wakho uzithembe ngokwaneleyo, angazama ukuzifundela, akhombe igama ngalinye. Zama ukumnika ixesha elaneleyo lokucinga ukuba lithini na igama uze umfundele ngokwakho igama xa engakwazi ukulibiza.
Ungaze umyeke esokola, nceda umncedise.
Ividiyo: Uyisonga njani incwadi encinci
Ninomntwana wakho dlalani umdlalo weAlfabhethi – le yindlela eyonwabisayo umntwana wakho aza kufunda ngayo ukuba bakhangeleka njani oonobumba bealfabhethi kwaye sithini isandi sikanobumba ngamnye. Thatha ixesha lakho, ungangxami futhi ukonwabele ukufunda kunye nomntwana wakho.
Xa abantwana bezoba batsho baqonde ukuba into eyinyani inako ukwenziwa ephepheni ibe ngumfanekiso. Eli ke linyathelo elibalulekileyo kubantwana abancinci. Xa umntwana eqalisa ukuzoba okukuqala, angenza nje imitshithi ephepheni. Kubalulekile ke ukubakhuthaza nokubaxhasa abantwana kwesi sigaba. Akufunekanga ukuba uyigxeke imizobo yabo okanye ubayalele ukuba bayiphucule ngokuthi bakope owakho umzobo. Kuthatha ixesha elide ukufunda isakhono esitsha kwaye kufuneka ubani aziqhelanise nesi sakhono kwindawo ekhuselekileyo. Ukuba siyabahleka abantwana xa benze impazamo okanye sibahlaze, abazukukwazi ukuba nesibindi sokuphinda bazame kwakhona.
Mncedise umntwana wakho acinge ngento anqwenela ukuyizoba uze umyeke ke azame. Lonke ixesha mnike ixesha lokuzama nelokupela amagama ngeli xesha umkhokela. Ukuba umntwana wakho uyakwazi ukunakana oonobumba abathile kunye nezandi ezenziwa ngaba nobumba, ungamkhuthaza uthi, “Ingaba eli gama ligxile kwesiphi isandi? Ingaba uyakwazi ukubhala laa nobumba? Ingaba kulandela esiphi isandi?” Akufunekanga ke ukuba umyeke esokola umntwana wakho, ungamncedi. Khumbula kaloku ukuba kubalulekile ukuba umntwana wakho azive onwabile kwaye ezithembile kwimizamo yakhe yokubhala. Akulunganga ukuba azive ngathi uyavavanywa futhi kufuneka igama ngalinye lichaneke. Umntwana wakho usenokushiyelela oonobumba futhi awapele ngokungachanekanga amagama. Oku kulungile. Ukubhala komntwana wakho kuza kukhula njengokuba lihamba ixesha ngoko ke mncome ze umkhuthaze kakhulu kuhambo lwakhe lokuba ngumbhali.
Ncoma amalinge akhe okubhala uzame ukuba ungamlungisi kakhulu. Bayonwaba xa beziva bephumelela kwaye ke xa bonwabile baza kuziqhelanisa rhoqo futhi bakhuthazeke baqhubekeke nokubhala.
Abantwana bayakonwabela ukwabelana ngezimvo zabo futhi bayavuya xa abantu abadala abahleli nabo bebonisa umdla kwinto abayithethayo. Amabali emifanekiso emiKhulu inika umntwana wakho ithuba lokufunda amagama amatsha aze abuze imibuzo futhi afumane nethuba lokukhulisa isakhono sakhe sokucinga nokuqiqa.
Xa wena nomntwana wakho nisebenza kunye kwibali lomfanekiso omKhulu, nceda usebenzise imibuzo esikunike yona khonukuze uvuselele ngayo incoko emalunga nezinto azibonayo. Incoko ethe gabalala engafuni zimpendulo ezingu ‘ewe’ okanye u ‘hayi’ iya kubaluncedo ekukhuliseni isakhono solwimi somntwana wakho. Mkhuthaze umntwana wakho ukuba ancokole ngezinto ezisemfanekisweni nendlela ezimkhumbuza ngayo ngamava akhe.
Ungazama ukusebenzisa eminye yale mibuzo ilandelayo: Kuza kwenzeka ntoni xa…?
Chaza ukuba kutheni ucinga njalo. Ucinga ntoni ngale nto?
Eyona ndawo ndiyithandayo yi…Khwandichazele ngeyona ndawo wena oyithandayo.
Le nto indikhumbuza ngexesha…Yiyiphi enye into ekukhumbuza yona le nto?
Akusoloko kulula emntwaneni ukuchaza iingcinga zakhe ngoko ke mnike ixesha lokucinga ngento ayibona emfanekisweni ze ayichaze ngamazwi akhe. Mncome, nokuba xa ephendula ubiza nje igama elinye.
Xa nidlala imidlalo yeebhodi nomntwana wakho, utsho afumane ithuba lokonwaba ngelixa afundayo abe futhi echitha ixesha kunye nawe. Yonwabelani ukudlala kunye umdlalo wentaka wamagama!
Xa nidlala umdlalo weNtaka wamagama nomntwana wakho kuza kufuneka acinge ngamagama agxile kwizandi ezahlukileyo. Mkhokele kakuhle xa engakwazi ukucinga igama.
Ukuba uyasokola ukulifumana igama eligxile kwisandi u /d/ umzekelo, usenokuthi: “Ewe esi sisandi u /d/. Masike silaqaze ke ngoku apha egumbini sijonge ukuba asinakuyifumana na into egxile kwisandi u /d/.” Okanye, “Ingaba ukhona umntu omaziyo onegama eliqala ngesandi u /d/? Dudu? Ewe, ligama elichenekileyo elo! Wenze kakuhle. Igama ‘Dudu’ liqala ngesandi u /d/.” Ungamkhuthaza umntwana wakho ukuba akhangele izinto ezinamagama anesi sandi okanye acinge ngamagama abantu abaziyo.
Nokonwabele ke ukudlala nomntwana wakho imidlalo yeebhodi. Mncome uze usebenzise amazwi akhuthazayo njengokuba niqhuba nidlala.
Cofa kwividiyo engezantsi ukuze ufunde ukuba udlalwa njani umdlalo
Ukuzoba nokubhala ziindlela ezibalulekileyo athi umntwana afunde ze abonise ngazo izinto azicingayo neengcamango zakhe. Nika umntwana wakho ithuba lokwenza oku rhoqo. Kufuneka umntwana wakho umnike ithuba lokuqwalasela imizekelo yokubhaliweyo kwindawo abahleli kuyo futhi ubabonise nawe indlela obhala ngayo xa usenza izinto zemihla ngemihla ezicwangcisiweyo. Ezi zinto ke zinokuquka ukubhala uluhlu lwezinto eziza kuthengwa, amacwecwe okanye amakhadi omhla wokuzalwa, imiyalezo eya kutitshala kunye nokubhala imiyalezo yefoni.
Mkhuthaze umntwana wakho xa ezama ukubhala kuba ufunda ukuvelisa into ayicingayo okanye indlela avakalelwa ngayo. Bonisa ukuba unomdla uze umncome umntwana wakho xa ebhala. Oku ke kuza kumenza azi ukuba into azama ukuyithetha ixabisekile kwaye uyayincoma. Khawukhe ucinge iindlela zokunika umntwana wakho ithuba lokubhala.
Angabhala amakhadi okanye amacwecwe, iileta ezilula, angabhala igama lakhe kwiqweqwe elingaphandle lencwadi yakhe okanye umcele akuncedise nibhale uluhlu lwezinto eziza kuthengwa. Mnike ithuba lokuzama ukuzibhalela amagama ngokwakhe umntwana. Amagama anzima usenokuwabhala ephepheni ukuze awakope xa besokola ukuwabhala. Mkhuthaze umntwana wakho ukuze akufune ukubhala futhi umnike amathuba amaninzi okwenza oko.
Umdlalo weNyekezu uncedisa umntwana ukuba akwazi ukwahlula amagama anoonobumba aba-3 babe zizandi ezahlukeneyo futhi uphinda ubancede bakwazi ukudibanisa izandi.
Xa abantwana bebazi oonobumba abali-12, bakulungele ukudibanisa oonobumba kunye ukuze bafunde amagama alula amafutshane. Onke amagama akumdlalo weNyekevu mafutshane kwaye abizeka lula. Abanye abantwana bangafumana ubunzima bokuva isandi esiphakathi okanye esikwilungu lokugqibela.
Lo mdlalo ke yindlela yokuzonwabisa neyokuziqhelanisa nokuva kwanokufunda izandi zamagama amafutshane. Ungadlalwa amaxesha amaninzi lo mdlalo kuqengqeleke iinyanga, khonukuze abantwana bafunde ukufunda. Uze ukhumbule ke ukuba akufunekanga umyeke umntwana wakho asokole ixesha elide ezama ukubiza igama. Ukuba uwonwabele umdlalo akhange umsokolise uza kukuvuyela ukuphinda awudlale kwakhona.
Zama ukulungiselela umntwana wakho indawo eniza kukhululeka, futhi nikhuthazeke xa nisebenzela kuyo. Oko kuza kumnceda akwazi ukumilisela ingqondo yakhe ngokulula ngelixa ekonwabele ukwenza imisebenzi.
Imisebenzi yeTIME ingenziwa naphi na, okubalulekileyo kukuba umntwana asebenzele phezu kwendawo eqinileyo. Xa ungenayo itafile, usenokusebenzisa itreyi, ikhadibhodi okanye incwadi eneqweqwe eliqinileyo abeke phezu kwayo iphepha lomsebenzi. Kufuneka ukhumbule ke ukuba abantwana bacinga ngcono, baphulaphule ngcono futhi bakwazi ukugxila kwinto abayenzayo ngcono xa ecinyiwe umabonakude (iTV) okanye unomathotholo xa besebenza.
Sizibonile iifoto neevidiyo ezintle ezibonisa indlela abonwaba nabazithemba ngayo abantwana xa abazali bebancoma bebakhuthaza ngemizamo nangomsebenzi abawenzayo. Xa umntwana wakho ephendula imibuzo esebenzisa igama elinye okanye amagama ambalwa, nceda uyamkele loo mpendulo. Akubalulekanga ukuba umntwana wakho ayiphendule yonke imibuzo ngesivakalisi esipheleleyo okanye akope izivakalisi zakho. Kufuneka umntwana wakho asoloko elonwabela ixesha elikhethekileyo lokufunda kunye nawe.
Ubusazi ukuba xa umntwana esebenzisa iminwe yakhe, le yenye yeendlela zokumncedisa akwazi ukubala futhi akwazi nokufumana iimpendulo xa esenza iisam? Inyani yeyokuba phambi kokuba bakwazi ukuwabiza amanani, abantwana abaninzi bakubonisa ukuqonda amanani ngeminwe yabo.
Musa ukumtyhafisa umntwana xa esebenzisa iminwe yakhe ekubaleni naxa esenza iisam. Xa esenza oku usebenzisa indlela yokwenene nelungileyo yokuzinceda xa ebala. Mncedise umntwana wakho xa ebala naxa esenza iisam ngokuthi nisebenzise izinto ezininzi ezahlukileyo.
Xa kufuneka esombulule into emalunga namacephe ekufuneka abekwe etafileni, sebenzisa amacephe okwenyani. Xa kusonjululwa ingxaki yokwabela abahlobo iziqhamo, sebenzisa iziqhamo zokwenyani. Xa ungenazo izinto zokwenyani, ungasebenzisa amaqhosha, iiphegzi, iziciko zeebhotile okanye amatye namagqabi onokuwafumana egadini.
Ukufunda amagama asetyenziswa rhoqo kuyamncedisa umntwana wakho ekubeni akwazi ukufunda nokubhala ngokulula.
Kuluncedo kakhulu ukwazi amagama asetyenziswa rhoqo kuba siyawabona kwaye siyawasebenzisa lonke ixesha. Onke amagama esiXhosa, amagama athile eAfrikansi nawesiNgesi asetyenziswa rhoqo, anako ukubizwa avakale. Kodwa ke ekugqibeleni, umntwana wakho uza kubanako ukuwanakana kwangoko la magama.
KwisiNgesi nakwiAfrikansi, maninzi amagama anokufakwa nje engqondweni kuba awakwazi ukuba angabizwa avakale. Ukudlala imidlalo eza kunika ithuba lokuziqhelanisa nala magama aluncedo, aza kubonwa rhoqo futhi asetyenziswe qho ngumntwana wakho kuza kumnceda kakhulu atsho akwazi ukufunda nokubhala ngokulula.
Ukuzoba linyathelo lokuqala lokubhala. Mkhuthaze futhi umkhokele umntwana wakho ngokuthi uncokole naye ngento aza kuyizoba.
Ngamanye amaxesha umntwana wakho uza kukucela ukuba umncedise xa ezoba umfanekiso. Usenokuziva ngathi akakwazi ukuzoba kakuhle okanye acinge ukuba wena ungawuzoba ngcono kunaye umfanekiso. Mncedise ke umntwana wakho ngokuthi usebenzise amagama nolwimi oluza kumnceda abe nomfanekiso-ngqondweni wento afuna ukuyizoba.
Xa umntwana wakho engaqinisekanga ngokuzizoba enxibe impahla yasebusika ungamncedisa uthi, “Masicinge okanye sijonge into ofuna ukuyizoba. Ingaba wena unentloko engqukuva okanye emile okweqanda? Ungakwazi ukuyizoba? Ingaba uthwele umnqwazi oshushu entloko? Unjani umbala womnqwazi osentloko? Ungakwazi ukuwufakela kumfanekiso wakho?” Ukhumbule ke ukuba umntwana wakho usafunda kwaye angangakwazi ukuyizoba eyona nto acinga ukuba ufuna ukuyizoba. Soloko umkhuthaza futhi umncoma. Ukulawula indlela yokubamba ipensile nokubeka iingcamango ephepheni kuthatha ixesha elide kwaye kufuna ukuba umntu aziqhelanise ngokwaneleyo.
Nize nikonwabele ukuphulaphula ibali elithi, Izihlangu zepati zikaKoketso.
Cofa apha ngezantsi ukumamela ibali kwaye ucofe ku + ukonyusa ubungakanani bokubhaliweyo
Ukukhangela ixesha elilungele ukufunda kunye
Ingaba ukufumanisa kunzima ukudala ixesha lokuxhasa ukufunda ekhaya? Uyakufumanisa ke ukuba ixesha elilungileyo lokusebenza nomntwana wakho lelasemva kwesikolo okanye emva kwemini. Abazali kunye nabantu abagcina abantwana bafika ekhaya ngorhatya.
Oku kuthetha ukuba kufuneka umkhuthaze umntwana wakho ukuba enze imisebenzi yeTIME ngexesha ubhuti okanye usisi wakhe omdala esenza owakhe umsebenzi. Usenokuzama phambi kokuba nilale xa sele nigqibe ukwenza yonke into kodwa ke ningasebenzi xa ubona ukuba umntwana wakho udiniwe. Ikhaya ngalinye lahlukile kwaye ninosapho lwakho niza kuyibona eyona ndlela kunye nexesha elilungileyo.
Ukunceda umntwana wakho akwazi ukumilisela ingqondo
Amakhaya ethu asoloko exakekile. Xa uqwalasela ukuba umntwana wakho akakwazi ukumilisela ingqondo xa ezoba okanye ebhala kufuneka umkhuthaze ngokuthi ujonge le nto sele eyenzile uthi, “Ndiyayithanda le nto uyenzayo! Ucinga ukuba uza kwenza ntoni apha?” uze ke emva koko ukhombe into elandelayo amele kukuyenza. Ukuba umntwana wakho umbona engayimiliselanga ingqondo ngexesha lebali okanye ngexesha lomsebenzi wokuphulaphula ungenza oku kulandelayo:
yiphinde kakuhle into ogqiba ukuyithetha
mkhumbuze ukuba imbalwa imibuzo eseleyo phambi kokuba nigqibe
mchazele ukuba usebenza kakuhle nangona ngamanye amaxesha kunzima ukuba amilisele ingqondo kwinto ayenzayo.
Ukuze abantwana bakwazi ukufunda nokubhala kufuneka bazi indlela abakhangeleka ngayo oonobumba kwaye kufuneka bazi nesandi esenziwa ngunobumba ngamnye.
Khomba kumfanekiso okwitshathi yealfabhethi uze uphulaphule indlela esibizwa ngayo isandi sokuqala okanye eso kugxilwe kuso.
Ukuze uqiniseke ukuba isandi ngasinye usibiza kakuhle, likhwaze igama xa ulibiza ukuze isandi esenziwa ngunobumba sicace kuwe. Khawukhe ukuzame ke oku!
Nize nonwabele kunye ukuphulaphula ibali elithi: ‘Ingonyama nempuku’.
Akufunekanga ude ube ungutitshala.
Ukwenza imisebenzi yeTIME ekhaya kunceda umntwana wakho ukuba aziqhelanise nezakhono azifunde esikolweni. Xa esebenza umntwana wakho, mkhuthaze xa ebonisa inkqubela-phambili uze uchithe ixesha elincinci kwiimpazamo azenzayo. Ungamkhuthaza ngolu hlobo, “Uzame kakuhle ke.” okanye “Mhle ke lo msebenzi.”
Okanye “Phinda uzame sele uza kuyichana impendulo.” Ukuba umntwana wakho ufumana ubunzima ekwenzeni into ethile, nceda wazise utitshala wakhe malunga nayo yonke into oyiqaphelayo xa nisebenza ekhaya. Utitshala uza kuyivuyela kakhulu into yokuchitha kwakho ixesha nomntwana wakho futhi uza kukwazi ukumnceda umntwana wakho xa efuna ukuxhaswa.
Xa umntwana wakho eziqhelanisa namagama aza kuwabona rhoqo, oku kuthetha ukuba ukuzithemba kwakhe kuyaphucuka ngakumbi.
Amanye amagama asetyenziswa rhoqo xa ethelekiswa namanye. Xa ewanakana ke umntwana wakho la magama, loo nto imnceda ukuba afunde ngokulula ngoko ke kulunge kakhulu ukuba adlale imidlalo eza kumnika ithuba lokuziqhelanisa nala magama.
Xa efumana ubunzima umntwana wakho, mncedise afunde nje isandi sokuqala segama uze ke emva koko umxelele ukuba lithini igama.
Click below to listen to watch video of how to play the game.
Imisebenzi yokubala iyamonwabisa umntwana wakho kwaye iyamncedisa ukuba akwazi ukukhumbula indlela alandelelana ngayo amanani.
Ukwenza izicengcelezo zamanani nokucula iingoma ezinentshukumo kunye nomntwana wakho kuya kumnceda afunde amagama amanani. Nika umntwana wakho ithuba lokuba akhombe into nganye phakathi kweqela lezinto aze achaze ukuba zingaphi ke xa zizonke.
Ziqhelaniseni nokubala niye phambili ze niphinde nibuye umva nibala ngesi-1 nilandelise ngokubala ngesi-2, ngesi-5 nange-10. Oku kuza kumnceda umntwana wakho akwazi ukubeka izinto ngokwamaqela futhi abale ngokukhawuleza.